မူလနရော » Saga
Updated: 2016-10-27 17:56
စုဂိနော့ ဟာမ မွေးမြူရေးခြံ
ခါဘဲရှိမား ကျွန်း ရဲ့ မြောက် ဖက်ပိုင်း ၊ ပင်လယ် ကို မျက်နှာ မူထား သော မွေး မြူရေးခြံကြီး ဖြစ်ကာ ဒီအတိုင်း လွှတ်ထား သော နွား ကြီး များ ၊ လေပြည်လေညှင်းလေး တွေ နဲ့ အတူ ၊ သာယာလှတဲ့ နေမင်း ကြ...
Updated: 2016-10-06 14:32
မိခါအဲရိ ရေတံခွန် ( သမင်လည်ပြန် ရေတံခွန် )
ဂျပန် နိုင်ငံ ရေတံခွန် ၁၀၀ စာရင်းမှာ မှတ်တမ်းတင်ခံ ထားး ရကာ အိုဥချိ မြို့ တွင် တည်ရှိသော မိခါအဲရိ ရေတံခွန် ။နွေဦးမှာ ချယ်ရီ၊ နွေမှာ အမြဲစိမ်းတော ၊ ဆောင်းဦးမှာ သစ်ရွက်ညိုပန်း များ ဖြင့် ရေတံခွန် ရဲ့...
သဘာဝရှုခင်း သတင်းအချက်အလက်များပင်လယ်ကမ်းခြေ၊ ကျွန်းဆွယ်၊ အငူများ
Updated: 2016-09-15 13:09
ဆူမိတိုရ ( ဆာဂ စားသောက်ဆိုင် )
ထုတ် လုပ် သူ များ နှင့် အသီး နှံ များ ကို စိုက် ပျိုး သူ များ ထံ မှ တိုက် ရိုက် တင် သွင်း ကာ ဆိုင်တွင် ချက် ပြုတ် ခြင်း များ ကို အဓိက ထား ကာ ၊ ကြက်ကင် ၊ မိဇုတာခိ ( ကြက်ပေါင်း ဟော့ပေါ့) ၊ ဆို...
Updated: 2016-09-13 14:50
ရော်ဘုကိုး က ကင်းမွန် ငါး
( အိက နော့ ခါစွတ် စွတ်ခုရိ ) ဒါမှမဟုတ် ရော်ဘုကိုအိက ( ရော်ဘုကိုး ရဲ့ အကောင်း ဆုံး အစားအစာ ) ဆို တာ ကတော့ ပန်းကန် ပြားပေါ် မှာ အိက လို့ခေါ်တဲ့ ကင်းမွန် ငါး ကို အစိမ်းလိုက် တည်ခင်း ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြင်...
Updated: 2016-09-12 16:55
ဟာဒို မီစခိ က စဇအဲရာခိ ( ပင်လယ်ခရု ကင်)
ပင်လယ်ခရုကင် ဟင်းလျာကတော့ ဟာဒိုမိစခိ ရဲ့ နာမည်ကြီး ဟင်းလျာ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဟာဒိုမီစခိ ရဲ့ ကားပါကင် နားလေးတွေ မှာ ပင်လယ်ခရု ကင် နဲ့ ကင်းမွန် ငါး ကင် တို့ ရောင်းချ သော ဆိုင် များ အများ အပြ...